Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2016 May 07
07 Mey 2016
Aogositra 2020 22 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 07 Mey 2016
Mikorontandrontana i Gambia, Fa Dia Tsy Misy Fantatrao Na Kely Aza
Afrika Mainty07 Mey 2016
Nisehoanà fihetsiketsehana tsy mbola nisy toa azy tao Gambia tamin'iny volana lasa iny. Tsy dia nahasarika loatra ny sain'ireo mpampahalala vaovao erantany izy ireny, saingy nanaraka azy kosa ny GV.
Tantara Mahasondriana Amin'ny Tantaran'ny Volan'i Colombia Amin'ny Tarehintsoratra 140 Na Latsak'izany
Amerika Latina07 Mey 2016
Mizara ny zavamisy marina momba ny volan'i Kolombia ao amin'ny Twitter i @MonedasColombia. Ohatra, fantatrao ve fa 100 taona lasa izay, namoaka vola taratasy 25 peso ahitana sarin'alika eo amboniny ny Banky Nasionaly?
Mampiseho Ny Fivoaran'ny Vehivavy Mpiadin'ny Firenena Araka Ny Vanim-Potoana Ny Minisiteran'ny Fiarovam-Pirenena Ao Kazakhstan
Azia Afovoany sy Kaokazy07 Mey 2016
Niainga tamin'ny mpifindrafindra monina nitondra sabatra ka tonga ho amin'ny kômandô mirongo basy mamahan-tena, nanao ny anjara asany tamin'ny fiarovana ny sisintanin'ny firenena ny vehivavy .
Fantaro ny momba ireo tenifototra valo izay manamora ny adihevitra ara-politika sy mikarakara fihetsiketsehana any Afrika Atsimo mihitsy aza.
Eoropa Afovoany & Atsinanana07 Mey 2016
Azia Atsinanana07 Mey 2016